Fikarohana momba ny firaisana Ny raharaha taloha momba an'i Jack London | Don Jacobs, PhD (Four Arrows) ahitana an'i Becky London, zanakavavin'i Jack London, izay mino fa Don dia ny famerenana amin'ny laoniny ny Ray malaza - Fikarohana momba ny fitsanganana amin'ny maty
Fomba fiaina: Don Jacobs, PhD, dia nitendry hira maromaro tamin'ny piano izay niraisan'ny Jack London, hira iray izay fantatra tamin'i Becky London, ilay zanakavavin'i Jack London velona
mpikaroka: Don Jacobs, PhD
Article by: Don Jacobs, PhD ary Walter Semkiw, MD
Don Jacobs amin'ny maha-teraka indray ao amin'ny Oniversiten'i Jack London
Don dia nifandray tamiko ary nitantara fa nanana toe-javatra vaovao momba ny fanambadiana izy io, izay izy no mpanoratra, mpanao gazety ary mpikatroka ara-tsosialy, Jack London, teo amin'ny fiainany taloha. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Don dia nanoratra ilay fitantarana omena etsy ambany momba ny tantarany, izay misy an'i Becky London, zanaka vavy kely ao Jack London. Ny zanany vavimatoa dia nantsoina hoe Joan.
Don koa dia mampiseho an'io fitantarana io amin'ny horonantsary omena etsy ambany, izay misy koa ny resadresaka nifanaovan'i Don sy Becky London, izay nanehoan'i Becky ny finoany fa i Don no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray ao amin'ny rainy, ary hitany ny mason-drainy eo imason'i Don sy i Becky ary Don mifankatia. Manaraka ity fitantaran'i Don ity:
Becky London dia mihaona amin'i Don Jacobs, Izay mahita ny mason-drainy amin'ireo mason'i Don Jacobs
"'Aleoko mihira hiran'oliva iray fotsiny ary mamaky ny foko amin'izany, toy izay miaina mandritra ny arivo taona mijery ny fandevonan-kanina ary matahotra ny lena." - Jack London, Ny Tendrombohitra Tasman(1916)
Ity teny ity dia toa fisokafana mety ho an'ny fampidiran-dresaka ho an'ny tafatafa nifanaovana tamin'ny video Becky London, zanakavavin'i Jack London, izay nitranga fony izy 85 taona. Ny filalaovako sy ny fihirako hira an'ala nosoratan'i Jack tenany no nampifandray ahy voalohany taminy.
Io no 1973. Ho an'ny asa, nilalao pianô amin'ny efa-taona aho mba hihira hira Shakey's Pizza Parlor in Jack London Square. Teo anelanelan'ny hira aho rehefa nanontany ny lehilahy malaza iray raha afaka mitendry hira ho an'ny vondron'olona ao amin'ny efitrano fivoriana any ambony rihana aho mandritra ny fialantsasatra manaraka. Nolazainy tamiko fa mpikambana ao ny olona Ny Fikambanana Jack London Buffs ary nanatrika fivoriana fanao isan-taona izy ireo.
Nomeny ahy izy stencil poezia poezia mitondra ny lohateny hoe, Ny hira Abalone, miaraka amin'ny anarana Jack London, Ambroce Bierce, George Sterling, Mary Austin ary Gellet Burgess eo ambanin'ny lohateny. Nilaza izy fa ny sasany amin'ireo tononkira dia navoaka voalohany tao amin'ny bokin'i Jack, Ny Lohasahan'ny Volana, izay mampianatra ny hafa ny maha-zava-dehibe ny fihirana hira masina momba ny abalone.
Ity lehilahy ity dia nilaza an'i Jack ary ireo mpihira miaraka ireo dia nihira ilay hira tamin'ny tena fiainana nandritra ny fihodinana ilay hena fotsy nalaina avy amin'ny vato kilaometatra teny amin'ny morontsirak'i Californie.
Nientam-po tamin'ny famakiana ireo tononkira aho. Izaho dia mpangalatra amam-bozaka, fa ny fahatsapana dia avy amin'ny zavatra hafa. Nanontaniako izy raha nanana ny mozika sy ny baiko izy. Namaly izy fa tsy misy velona velively ny fomba handehanan'ny hira. Fafao fotsiny amin'ny tady sasany ary hihira toy izao isika.
Don Jacobs Milalao an-tsitrapo sy tsy misy fahatsiarovan-tena ny hiran'ny hiran'i Jack London Abalone
Nipetraka teo am-piano aho ary nijery ireo teny tao amin'ilay taratasy. Tonga avy hatrany ny hira iray ary nanomboka aho. Raha vantany vao nanomboka nihira ilay hira aho dia nahatsapa ho tsy nahazatra azy. Ankoatra izany, rehefa nihira tamim-pihetseham-po niaraka tamiko ny vondron'olona, ​​dia nahatsapa fifaliana aho mihoatra noho ny fahatsapana mahagaga izay tsapako hatramin'izay rehefa niara-nihira tamiko ny olona. Ny tononkira dia:
Hira Abalone an'i Jack London
Oh, misy olona sasany mirehareha amin'ny papelika manandrify ny tohatra satria mieritreritra izy ireo ny hafanana. Saingy afa-po aho handoavana ny hofan-trano ary hiaina amin'ny abalone.
Ny sasany dia miaina amin'ny fanantenana ary ny sasany amin'ny dopo ary ny sasany amin'ny alimony. Omeo ganika misy dihin-doko sy plastika misy ahy aho.
Oh, toerana mahafinaritra ny Mission Point, izay ahitana ny voankazo tsirairay. Fa marina sy hatsaram-panahy kosa no hitanao foana ny fialokalofana.
Ary nandeha izany. Rehefa avy nihira ireo andininy efatra na dimy aho rehefa navoaka tao amin'ny taratasy dia nitsangana aho ary nidradradradra tamin'ny olon-drehetra raha vao nivoaka ny sehatra. Nisy tehaka rehefa nanomboka ny fivoahako aho tamin'ny alalan'ny mpihaino mipetraka ary nisy olona maro nanozongozona ny tanako ary nisaotra ahy teny an-dalana.
Becky London Nifandimby ny Don Jacobs ary naveriny ny tononkalo Jack London afaka nanoratra
Raha efa teo akaikin'ny faritry ny olona aho, vehivavy iray antitra noho ny ankamaroan'ny vahoaka dia nanatona ahy tamin'ny tanako ary nanakana ahy. Rehefa nahita ny endrik'izy ireo aho sy ny volon'ny loko matevina dia nahatsapa zavatra efa mahazatra ahy indray aho amin'ny fahatsiarovako.
'Ahoana no nahafantaranao an'io hira io ?! ' Nanontany moramora izy fa tamin'ny feo mangovitra, tsy tamin'ny taonany akory, fa noho ny fahagagana miharihary izay nampisavorovoro azy.
'Oh, tsy tena fantatro io, Ramatoa. Nomena ahy ihany ny kopian'ny teny ary nasain'izy ireo nanao sandoka aho satria tsy nisy nahalala ny tena feon-kira. Toa i Jack London no nihira azy taloha rehefa nikapoka ilay abalone izy. '
Mila miverina miasa aho fa tsy hamela ny tanako. Tsaroako tsapako ny faniriana hanakatona azy sy hampionona azy, ka dia nijanona aho.
Avy eo dia niteny indray izy hoe: 'Tsia, izany tokoa no gadona. Izaho dia 14 taona rehefa maty i Dada ary henoko matetika ilay hira rehefa navela hanatevin-daharana azy sy ny palalany aho rehefa nentin'izy ireo nody ilay abalone ary nanomboka nokapohiny. '
Nisy jiro tao amin'ny masony, toy ny mahatsiaro ny hafaliana tsy fahita firy teo amin'ny fiainany. Nijoro teo aho, zatovolahy iray avy ao 27, nitazona ny tanan'i Becky London, 72, ilay zanakavavin'ny reniny malaza. Toa izy no vahiny nahazo voninahitra. Avy eo, manadino ny zava-drehetra sy ny olon-drehetra ankoatra an'ity ramatoa ity, dia nahatratra ny tanany iray hafa tamin'ny tanako iray hafa aho ary niondrika teo alohany ary noho ny antony tsy hay fantarina izay nanontaniako:
'Azoko atao ve ny mizara tononkalo nosoratako momba ny 6 taona lasa izay fony aho tao amin'ny Corps Marin,'
Novalian'i Becky tamin'ny bitsibitsika tamim-pahazotoana toy ny zaza, 'Oh tiako hohenoina izany.' Nanomboka aho:
Mba hahafaty ahy anio,
Ny haavon'ny toerana avo indrindra.
Ary na dia mitomany aza ny fitiavako,
Mbola fantatro fa tsy maintsy manandrana aho.
Tsy maintsy manandrana mandre izany rehetra izany aho
Na eo aza ny tahotra na ny loza -
Tsy maintsy mamaly ny antso rehetra aho,
Ka tsy ho olon-tsy fantatra ny fiainana.
Oh ny herim-po ve no mahatonga ahy ho sarotra ny ho faty?
Sa fotsiny ny finoana hoe ny fahafatesana dia atokana ho an'ny ho avy?
Tokony hiezaka sy hiezaka foana ve aho?
Sa kosa matory fotsiny sy miandry ary miandry?
Ho an'ny fiainam-piainana maro dia tafavoaka velona fotsiny,
Saingy nahazo hery sy harena aho
Noho izany dia tsy maintsy mitady ny valiny tena ilaina aho
Ho fanampiana ny hitondra anay any amin'ny fahasalamana.
Aoka àry ity tononkalo ity ho ny epitaphako.
Nanontany tena aho ary nanandrana.
Niady sy nitiavako aho
Ary nihomehy sy nitomany,
Saingy raha velona aho dia maty!
Nosakosako moramora ny tanany ary napetrany teo amin'ny tarehiny ny masony ary nijery ny masoko izy ary niteny hoe:
'Toa zavatra nosoratan'i Dada izany.'
Ny teniny dia mitantara ireo taona rehetra ireo taty aoriana ary sahiran-tsaina aho rehefa nanoratra azy ireo aho.
Don Jacobs nitsidika an'i Becky London tany Glen Ellen, Californie, izay i Jack London no nanamboatra ny toerany. Fiaraha-miasan'ny taona 20
Tsy tadidiko raha nangataka azy aho na nangataka ahy hitsidika izy, fa ny ampitson'io dia nitondra fiara avy tao amin'ny marina nipetrahako tamin'ny sambo lakandrano tao Alameda, Kalifornia aho, mba hijery an'i Becky tao Glen Ellen. Nipetraka tao amin'ny efitrano iray teo akaikin'ny fivarotana boky iray fananan'i Russ Kingman izy, izay mpahay tantaran'ny tantaran'i Jack London. Noho i Becky tsy nandova vola tamin'ny tanin'ny rainy, dia nanome azy trano honenana i Kingman.
Tsy tsaroako ny zavatra noresahinay nandritra ny fihaonako faharoa tamin'i Becky, saingy nanomboka nifandray akaiky izy io nandritra ny 20 taona raha tsy efa nodimandry tao 1992 izy. Nandany andro fialan-tsasatra niaraka tamiko izaho sy ny fianakaviako i Becky ary nentiko tany amin'ny fiaramanidiny voalohany izy ary nandray azy tamin'ny soavaliny voalohany. (Manana sary ho an'ny boky izay soratako hanoratana momba ny tantarantsika aho.) Becky Londres dia nanana fifandraisana saro-bahana niaraka tamin'ny rainy, kanefa toa ny fifandraisanay dia nahafeno ny fiainany taloha.
Ny asa lehibe indrindra nataonay, izay nankafiziny indrindra, dia fony izy niaraka tamiko fony aho nilalao piano tany amin'ny toerana samihafa. Toa maro amin'ireo hira nataoko ireo no tian'i Jack London, anisan'izany Alabamy Bound, Aorian'ny fandraranao, Ace ao amin'ny Toerana, Tsy ho avy ao an-trano Bill Baily ve ianao?, Mamirapiratra amin'ny Harvest Moon ary Ragtime Cowboy Joe.
Tsaroako fa nilalao sy nihira aho Daddy's Little Girl Niaraka tamin'i Becky teo anilako tao amin'ny toerana iray tany Sonoma, Kalifornia, izay nahitako mivady izaho Bea vadiko (Bea nilalao banjo).
Nandritra io fampisehoana io dia nitomany i Becky. Nivoaka tamin'ny 1906 ity hira ity rehefa efa-taona i Becky, ary tadidiny ny rainy ary nihira azy ho azy.
Ny fiainam-pifaliana tsy azon'i Becky London sy ny fanirian'i Jack London ho tonga lehilahy Piano, raha miverina ao amin'ny vatana vaovao indray izy
Becky dia mpikomy mavitrika sy mahatsikaiky toy ny rainy. Mampalahelo fa nanana fiainana tsy sambatra izy. Noho ny fisaraham-panambadiana mahatsiravina teo amin'i Jack London sy ny vadiny dia nolavin'i Jack ny zananivavy roa. Noho izany, dia zara raha niaraka tamin'ny rainy i Becky.
Nanambady indray ny renin'i Becky taty aoriana ary nilaza tamiko tsy an-kijanona i Becky fa tezitra amin'ny reniny izy ary tsy tiany ny vadiny vaovao, izay nahatonga ny reniny hanana fiainana tsy faly koa. Nilaza i Becky fa tsy te hampiasa vola amin'ny fomba rehetra amin'ny maha-zanakavavin'i Jack London azy izy.
Nilaza tamiko i Becky fa iray amin'ireo fotoana vitsy (na ny fotoana tokana monja) izay nandany hariva irery niaraka tamin'ny rainy dia iray amin'ireo andro tsara indrindra teo amin'ny fiainany. Valo na sivy taona izy, mieritreritra aho fa nilaza tamiko izy. Nolazainy fa nentiny nivoaka izy mba hihinana ary avy eo dia nanatrika ny fivorian'ny vaomiera tao amin'ny Orpheum tany Oakland, Kalifornia.
Nilaza i Becky fa ny hetsika tian'i Jack indrindra tamin'io seho io dia ny lehilahy iray izay nilalao mozika malaza tamin'ny andro taloha tamin'ny piano. Raha milalao hira miaina manokana izy, hoy izy hoe milalao matetika aho (iriko mba tadidiko izay iray!), Niankohoka i Jack ary nibitsibitsika tao an-tsofiny fa raha afaka 'miverina' izy, aorian'ny fandaozany ity tontolo ity dia maniry izy hahafahany manao 'izany' ary nanondro ilay lehilahy piano izy.
Izahay sy Becky dia nizara zavatra niainana maro nandritra ny taona maro talohan'ny resadresaka tamin'ny video aseho etsy ambany. Manantena aho fa hanome aingam-panahy ny fahazoana ny fifandraisana miafina lehibe ananantsika mandritra ny androm-piainantsika maro. Angamba andro vitsivitsy hanoratako boky momba an'ity sy momba ny fomba izaranay sy i Jack London mizara karana amerikana matanjaka taloha koa.
Notes by Walter Semkiw, MD momba an'i Don Jacobs ho teraka tamin'ny fanamboarana indray an'i Jack London
Ity tranga reincarnation ity dia manery, mifototra amin'ny faneken'i Becky London an'i Don ho teraka indray ny rainy, ary koa ny fomba namerenan'i Don Jacobs tsy fahatsiarovan-tena sy nanehoana ny feon-kiran'i Jack London's Abalone Song. Ny tranga maro momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana dia mampiseho fa azo atao ny mamolavola talenta sy fivoarana ara-javakanto mandritra ny androm-piainany.
Ohatra, tamin'ny tranga nahaterahan'i Paul Gauguin | Peter Teekamp, ​​Peter, nandritra ny fahazazany, dia namerina namoaka an-tsoratra tamin'ny ankapobeny nosoratan'i Paul Gauguin. Ao amin'ny Anne Frank | Ny trangan'i Barbro Karlen, Barbro dia fanangonan-tsakafo an-tsoratra, toa an'i Anne. Raha te hianatra bebe kokoa, azafady mankany:
Paul Gauguin | Peter Teekamp raharaha momba ny fiainan'ny taloha
Fiainana Taloha teo anelanelan'i Jack London sy Don Jacobs
Nilaza tamin'i Becky zanany vavy i Jack London, satria nankafy ny piano "Old Old" izy ireo, ka raha te hiverina indray izy dia te ho mpilalao pianô izy. Don Jacobs nanomboka nilalao pianô tamin'ny taona 4 ary lasa lasa olom-pirenena "piano" an'ny "Old Time". Don Jacobs dia mbola tsy naka lesona piano nandritra ny androm-piainany. Ny sary amin'ny fisehoana ankavanana Don performing.
View: Don Jacobs tao amin'ny 2016 Oldtime Piano Championship
Ity Don Jacobs izay afaka milalao piano tsy misy torolalana dia manondro fa ny fanahy dia afaka mianatra fahaiza-manao ao amin'ny tontolon'ny fanahy, izay hambarany amin'ny fiainana ara-batana.
Ankoatra izany, ireo hira piano nentin'i Don dia ny sangan'asa tamin'ny andron'i Jack London. Raha ny marina, dia nilaza tamin'i Don i Becky London fa ny pianô ny piano izay noraisiny tamim-pitiavana dia tian'ny rainy, Jack London.
Jack London dia sosialista izay nampiroborobo ny firaisankinan'ny mpiasa amerikana. Don Jacobs dia nitantara fa teraka tamina fianakaviana sendikaly matanjaka izy. Ny raiben'i Don no solontenan'ny Vondrona Iraisam-pirenena Momba ny Asa (ILO) voalohany teo ambany fitantanan'ny filoham-pirenena amerikana Harry Truman. Ny raiben'i Don koa dia ny filoha lefitry ny fianakavian'ny mpirahalahy herinaratra (IBEW). Don koa dia mpihetsiketsika mpomba ny asa.
Ity karazana fiarahana na fifanoratana ity dia mety hitranga satria ny olona dia mikasa ny fiainana mandritra ny androm-piainany mba hiaraka amin'ny olon-tiana tamin'ny nofo taloha. Na dia tsy fantatsika aza hoe iza ny havan'i Don tamin'ny androm-piainan'i Jack London, azo inoana fa mpiara-miasa tamin'i Londres izy ireo, angamba koa ny olona Jack nihira ny Abalone Song miaraka. Raha te hianatra bebe kokoa, azafady mankany:
FAMPIANARANA SY FAMPANDROSOANA
Jack London dia lasa mpisava lalana manoratra fiction izay nahomby ara-bola. Ny ankamaroan'ny tantarany dia nahitana zava-niainana tamin'ny natiora. I Londona dia heverina ho iray amin'ireo mpanoratra mpanoratra mahomby indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Don Jacobs dia nanoratra momba ireo boky 20 sy lahatsoratra an-jatony momba ny gazety. Don dia hita taratra fa ny lohahevitry ny lahatsoratra dia mitovy amin'ireo izay nosoratan'i Jack London.
Ny boky farany nataon'i Jack London, Star Rover, dia momba ny fahatsiarovana ny fiainana taloha. Don Jacobs dia nanjary manam-pahaizana momba ny hypnosis sy ny famerenana amin'ny fiainana indray, ary nampianatra mihitsy aza ny fandaharam-pampianarana maîtrise momba ny hypnosis tao amin'ny University of California, Berkeley.
Maty tamin'ny fahafatesana i Jack London tamin'ny taonan'ny 40, ampahany noho ny fifohana sigara sy ny fisotroana tafahoatra. Don Jacobs dia mpisolovava momba ny fahasalamana ary nanana boky maromaro navoakany momba ny fiterahana ara-batana sy ny fanararaotana.
Jack London dia tantsambo tonga lafatra izay nanolotra ny fahaizany manoloana ny Bay San Francisco. Nandeha sambo nanodidina ny Nosy Kanal tao atsimon'i Californie, akaikin'i Los Angeles.
Rehefa nialan'i Don avy any amin'ny Tafika Amerikanina miaraka amin'ny laharana ny kapiteny, dia nividy sambo iray izay niainany izy ary namerina namakivaky ny dia an-dalan'i Londres, talohan'ny nahafantaran'i Don fa nanao toy izany ihany koa i Jack. Ny tanjon'ny atleta hafa nizara an'i Jack sy Don dia ny fanaraha-maso sy ny ady totohondry.
Jack London no mpitaingin-tsoavaly. Don Jacobs koa dia mpitaingin-tsoavaly iray izay nofinidy voalohany ho an'ny ekipan'ny 1996 Olympic Equestrian Endurance. Ny mahaliana, ny tantaram-pitiavana voalohany nataon'i Jack London dia nosoratan'i Irving Stone ary nomeny anarana hoe: Sailor on Horseback.
Ny fitiavan-tena iray hafa izay nizarazarain'i Jack London sy Don Jacobs dia manamboatra ny fambolena any amin'ny morontsirak'i Californie. Don, nandritra ny taona 20, dia nandao ny alahady isaky ny alika hanangom-bary avy amin'ny vato eny ambany.
Nizara i Don fa nanakiana mafy ny fanabeazana i Jack London ary nahita izany ho toy ny famoronana “hadalana iraisana”. Raha ny fahitana azy, tamin'ny ezaka natao hamahana ity olana ity dia nanoratra boky maro momba ny fanabeazana i Don ary profesora tao amin'ny Oniversite An-tsekoly Fielding izy.
Jack London dia nekena ho any amin'ny oniversite malaza any California, Berkeley, saingy tsy maintsy nilatsaka taorian'ny semester iray noho ny olana ara-bola. Nizara i Don izay nampianariny nandritra ny fotoana fohy tany UC, Berkeley ary tamin'izany fotoana izany dia tsaroany ny “fahatsapana manjavozavo amin'ny karazana fanavotana.”
Don ihany koa dia nitantara fa nankafizin'ny mponina Meksikana i Londres. Don dia nitazona trano iray tany Meksika nandritra ny taona 20 ary mbola monina ao amin'io firenena io, na dia miaina any amin'ny faritra hafa any Amerika Avaratra koa aza izy.
Araka ny voalaza etsy ambony, ny fomba raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao any Jack London | Don Jacobs dia nipoitra rehefa nangatahana i Don mba hitendry piano miaraka amin'ny London's Abalone Song, mba hahafahan'i Jack Becky London sy ny namany mihira miaraka. Tsy namerina ny feon-kira ho an'ity hira izay nohirain'i Jack sy ny sakaizany ity i Don. Rehefa nandeha ny fotoana dia natoky i Becky fa i Don no teraka tao amin'ny vatana vaovao indray tamin'ny rainy ary nifarana ny resaka nifanaovana tamina sary an-tsary niaraka tamin'i Don, voalaza etsy ambany, ny teniny farany dia: "Fantatro izany satria hitako eo imasonao izy."
Don Jacobs no voamarina rehefa nazava ny fampisavorovoroan'i Jack London sy Don Affinity amin'ny kolontsaina Indiana Indiana
Na dia i Don Jacobs aza dia nahalala ny fiainany taloha toa an'i Jack London raha ny fifandraisany tamin'i Becky London, tao anatin'izany toe-javatra izany aho dia nahita ny fanombantombanana mpitari-dalana iray antsoina hoe Ahtun Re, izay nampitain'ny mpilalao malaza malaza eran-tany Kevin Ryerson. Niara-niasa tamin'i Kevin aho tamin'ny isam-bolana nanomboka tamin'ny 2001 ary nahitako fa i Ahtun Re dia manana fahafahana hanao ny lalao miaina amin'ny fiainana feno araka ny tokony ho izy.
Tao anatin'ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin izay natao tao amin'ny 2019, nanontaniako raha i Don Jacobs no vatana vaovao indray ao amin'i Jack London. Ahtun Re namaly fa marina izany. Jack London, teny am-pandehanana Novambra 22, 1916, raha teraka i Don tamin'ny 13 Jona 1946, 30 taona teo ho eo taorian'ny nahafatesan'i Londres.
Don dia nanana firaiketam-po lalina tamin'ny kolontsaina Indiana Amerikanina ary nampiasa ny anarana ofisialy hoe "Don Jacobs (Arrows Arrows) aza." Amin'ny lafiny ara-poko, i Don dia Cherokee sy Irlandey, noho izany dia manana rà amerikanina izy. Nanazava i Don fa ny foko Lakota dia nanome azy ny anarana hoe "Four Arrows" taorian'ny nahazoany fahitana izay tsy nisy lanonana intsony. Tao anatin'ity fahitana ity dia nahita zana-tsipìka efatra nitifitra avy teo afovoan'ny farihy izy, samy nandeha tamin'ny lalana hafa izy ireo. Rehefa nidina ny zana-tsipìka, dia navadik'izy ireo ho biby hafa, indrindra fa soavaly, amboadia, cougar ary zana. Ny Lakota dia nanome azy anarana Wahinkpe Topa avy eo, izay midika hoe Zana-tsipika efatra.
Nandritra ny fotoam-pivoriana niaraka tamin'i Kevin dia nanontany an'i Ahtun Re aho raha toa i Don ihany koa dia efa niaina tamin'ny fiainana amerikana taloha izay mety hampanan-kery ny firaiketam-pony amin'ny kolotsaina Amerikana.
Namaly i Ahtun Re fa Don, talohan'ny fiainany fony Jack London, dia Lehiben'ny Indianina antsoina hoe Four Bears, avy amin'ny foko Mandan North Dakota. Nahazo io anarana io toy ny tamin'ny ady iray manokana izy, nahita ny foko izay niady tamin'ny herin'ny karazana efatra. Bears efatra maty tamin'ny Jolay 30, 1837, fony i Jack London Janoary 12, 1876.
Rehefa nanoratra tamin'i Don aho mba hampahafantatra azy ity fanambarana ity, rehefa avy nandinika ny Bears Four, dia nitantara i Don fa izy dia manondro tanteraka an'ity mpitarika Indiana ity, momba ny fahaiza-miaina, ny toetra sy ny toetra ara-batana. Don wrote:
“Nianatra nandritra ny ora maro aho momba ny Bear efatra. Na dia mihoatra noho ny endrika ivelany aza, ny vatany dia mitovy amin'ny ahy ary 'nahatsapa' fifandraisana lalina aho rehefa namaky ny maha-mahery fo azy sy ny tantarany mampalahelo. Azo antoka fa tsy kisendrasendra izany nandritra ny fihetsiketsehana 'fitsidihana adidy' nataoko efatra fananganana fantsom-pitaterana ao amin'ny Standing Rock, Niondrika tamin'ny Indiana Mandan aho ary nahafantatra ny tsy rariny mahatsiravina misy amin'izao fotoana izao sy ny famandrihana any Dakota Avaratra.
Misy soratra efatra momba ny fahalalàn'ny Vazimba teratany ny fiainako. ”
Mariho fa nandritra ny androm-piainana roa dia nanana anarana Amerikanina Teratany izay misy biby sy ny isa efatra i Don. Ny olona manana saina ara-tsaina dia afaka mahatsapa tsy misy fahatsiarovan-tena amin'ny fiainana taloha, izay mety hitarika fiverimberenan'ny lamina.
Fitoviana ara-batana: Ireo no fitoviana eo amin'ny endriky ny endrika eo amin'i Don Jacobs, Jack London sy Four Bears. Ao amin'ny sary omena etsy ankavanana, Don Jacobs dia 72 taona. Maty i Jack London fony izy 40 taona.
Ny fiainana taloha talenta sy ny fitondran-tena: Ny fifanintsanana misy eo amin'i Don, Jack sy Bears Four dia voatondro etsy ambony.